Al-Shabaab oo sheegay in aay la wareegen degaan ka tirsan Puntland – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaAl-Shabaab oo sheegay in aay la wareegen degaan ka tirsan Puntland
20/07/2018 Wararka Soomaalia 0
Hiiraan Xog, July 20, 2018:- Idaacadda Andalus ee ku hadasha afka Al-Shabaab ayaa baahisay dagaalyahano ururka ka tirsan in saakay aroortii ay dagaal la’aan kula wareegeen gacan ku heynta degaanka Af-Urur oo dhanka Koonfureed kaga toosan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari.
Shabaab qabsashadooda degaankan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii halkaasi shalay gelinkii dambe ay isaga baxeen ciidanka Puntland ee fariisimha ku lahaa degaanka.
Ilo xog ogaal ah ayaa waxa ay inoo sheegeen in Shabaab hubeysan oo laba boqol gaaraya ay la wareegeen degaanka, kuwaasi oo maalmihii dambe kulaalayay degaanka iyo hareerahiisa.
Al-Shabaab waxa ay sheegeen in ciidankooda qaar ay tageen difaacyada ciidanka Puntland, halka qaarka kalena ay gaaf wareegayaan aagga degaanka, waxayna intaasi raaciyeen inay kulamo la yeesheen waxgaradka degaanka oo ay u sheegeen inaanay wadin wax dhibaato ah.
Warar madax banaan ayaa sheegaya ciidankii Puntland ee ka baxay degaanka inay u jiheysteen dhanka degaanka Carmo, halkaasi oo ay ka wadaan abaabul dagaal oo ku jeeda sidii markale ay u xaqiijin lahaayeen gacan ku heynta degaanka Af-Urur.
Ilaa hadda saraakiisha ciidamada Puntland kama aanay hadlin warka Al-Shabaab ee ku aadan qabsashada degaanka Af-Urur.
Al-Shabaab ayaa inta badan aroortii qaada hawlgalada ay la beegsanayaan ciidanka ka soo horjeeda, sanadkii hore degaanka Af-Urur waxaa ka dhacay dagaalo culus, kadib markii Al-Shabaab ay weerareen ciidanka maamulka Puntland ee halkaas ku sugnaa.